Survey shows Myanmar millennials give less importance to brands (54 percent) and more importance to social influence (66 percent) in their buying decisions - amazingyangon
Home /Featured, Media, Uncategorized/Survey shows Myanmar millennials give less importance to brands (54 percent) and more importance to social influence (66 percent) in their buying decisions
In contrast with millennials from neighboring countries, Myanmar youth favor functionality and social media over brand image
YANGON – September 12, 2017 – Millennials in Myanmar takeaunique approach when making purchase decisions. A majority of them (54 percent) places product and service functionalities above all else. More of them (66 percent) even prize social media the most as their key source for influence. These are two of the key insights ofaconsumer sentiment survey – Who Are Myanmar Millennials? (WAMM?) – commissioned and released today by Vero,aleading ASEAN PR, social media and digital marketing agency.
“Millennial” is the name given to people born between years 1982 and 2000. Today, there are approximately 16.6 million millennials in Myanmar, which accounts for roughly 33 percent of the total population. Born with the global digital shift, this growing community is believed to be trendsetters and great indicators to how behaviors evolve and adapt to change.
“This study really reveals the power of the Myanmar millennials to shape the marketplace and influence buying decisions for the whole family,” said Brian Griffin, CEO of Vero, ASEAN. “Rather than always relying on elders for direction, the study indicates that millennials are using social media as word of mouth, and this in turn impacts how families consume and which companies they favor.”
Myanmar millennials do not put the same stock in brand loyalty or brand promises, as do millennials in neighboring countries. Only 46 percent of Myanmar millennials cite brand image asacritical factor in buying decisions. This comes in contrast withahigh level of brand preference among millennials in Laos (72 percent) and Cambodia (73 percent). Instead of brand image, Myanmar millennials (54 percent) are apt to make purchases based on functional aspects of the product or service. For them, Vero’s WAMM survey shows attributes such as country of origin, technology, value for money and international awards playagreater role than brand popularity or brand trust.
“Businesses must understand that due to the country’s unique history, the way millennials view brands in Myanmar is like no other. Understanding how these millennials think and what to tell them is invaluable forabrand,” said Nicolas Trinquier, Strategic Communications & Client Engagement Director for Vero.
The other major takeaway from Vero’s WAMM study is that 66 percent of Myanmar millennials put social media influence above all else in making purchasing decisions. More surprisingly, it is even more influential than families, friends and even the Internet asasource for information. The survey reveals that Facebook is by far (99 percent) the dominant platform for millennials in Myanmar – with print media, TV, and radio lagging behind.
“Along with widespread internet accessibility, Myanmar’s online population has been increasing rapidly and not surprisingly, with Facebook as the most preferred source of information. Facebook has become the gateway to the web for Myanmar people and more so for Myanmar millennials whose buying decisions are heavily influenced by Facebook,” said Su Su Htwe, Senior PR & Operations Manager.
Vero’s WAMM study is aimed at gathering comprehensive insights on the country’s most dynamic and progressive demographical cohort –ageneration whose behaviors remain mostly undocumented. Therefore, the insights revealed by Vero’s survey should strengthen communications and broaden perspectives for businesses and marketers to better engage with this community of Myanmar millennials through effective messages and initiatives.
“As the country is moving fast, so are behaviors and expectations. From the products they build to the messages they voice, brands ought to nurtureaconstant bond with their audiences. At the end of the day, and like in any other kind of relationship, it all starts with some self-questioning and withagood dose of curiosity. Vero gives brandsalittle help with this survey,” said Raphael Lachkar, Digital & PR Manager at Vero.
Vero’s WAMM survey was conducted by Indochina Research, an independent market research company.
To download Vero’s WAMM survey, please go to http://wamm.veropr.com.
Founded in 2007, Vero has been nominated four times by The Holmes Report as Southeast Asia’s PR Agency of the Year. Vero is an ASEAN PR, social and digital marketing agency. Vero owns offices in Myanmar, Thailand, and Vietnam and ranks among the leading agency networks in Southeast Asia. Vero was one of the first regional agencies to open its office in Yangon in 2012. It is independent, employee-owned and managed. More info: www.veropr.com.
မြန်မာနိုင်ငံက Millennial လူငယ်များသည် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အမှတ်တံဆိပ်ကိုဦးစားပေးမှုနည်းပြီး (၅၄ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုပိုမိုအလေးပေးလေ့ရှိသည် (၆၆ ရာခိုင်နှုန်း) ဟု စစ်တမ်းအရသိရှိရ
မြန်မာနိုင်ငံရှိလူငယ်များသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လူငယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် အမှတ်တံဆိပ်ထက် အသုံးဝင်မှုနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏လွှမ်းမိုးမှုကို ပိုမိုအလေးထားကြသည်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်များသည် ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားစွာစဉ်းစားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသော လူငယ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့၏ အသုံးဝင်မှုကို အခြား အချက်များထက်ပို၍ အလေးပေးစဉ်းစားကြသည်။ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသော လူငယ်တို့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အဓိကသတင်းအချက်အလက်ရယူရန် အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤအချက်များသည် ASEAN PR, social and digital marketing ဦးဆောင်အေဂျင်စီတစ်ခု ဖြစ်သော Vero က ဦးစီးလေ့လာပြီး ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သော ဝယ်ယူစားသုံးသူများ၏ သဘောထား စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် – Who Are Myanmar Millennials? (WAMM?) – စစ်တမ်းမှ အဓိက တွေ့ရှိချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။
“Millennial” ဆိုသည်မှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အကြားမွေးဖွားသောသူများကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် millennial လူငယ်ပေါင်း ၁၆.၆ သန်း နီးပါးရှိပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏
၃၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဒီဂျစ်တယ်ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသော ဤ millennial လူငယ်များသည် လမ်းကြောင်းသစ်ဖန်တီးသူများဖြစ်ကြပြီး ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်ရောညီထွေရှိအောင် ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံများ မည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ကို ဖော်ညွှန်းနေသူများလည်းဖြစ်ကြသည်။
“ဒီလေ့လာမှုကနေတစ်ဆင့် မြန်မာ millennial လူငယ်တွေရဲ့ ဈေးကွက်ကိုပုံဖော်နိုင်မှုနဲ့ မိသားစုတစ်ခုလုံး အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်မှုအပေါ် ဦးဆောင်စွမ်းအားတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်” ဟု
Vero, ASEAN ၏ CEO ဖြစ်သူ Brian Griffin က ပြောကြားခဲ့သည်။ “လူငယ်တွေဟာ လူကြီးတွေရဲ့ အကြံပေးလမ်းညွှန်မှုအပေါ်အမြဲမှီခိုနေမယ့်အစား ဆိုရှယ်မီဒီယာကို လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြု နေကြတာကို ဒီလေ့လာမှုကနေဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ မိသားစုတွေက ဘယ်လိုဝယ်ယူ စားသုံးမှု ပြုလုပ်တယ်၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေကို ပိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာ အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်”
မြန်မာနိုင်ငံက millennial လူငယ်များသည် အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှလူငယ်များကဲ့သို့ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်ကိုအစွဲထားခြင်း သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်၏ အာမခံချက်ကတိများအပေါ် အလေးထားခြင်း မရှိကြပါ။ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းသော မြန်မာလူငယ်များကသာ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတွင် အမှတ်တံဆိပ်ကို အဓိကအချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိကြပါသည်။ အခြားနိုင်ငံများရှိလူငယ်များ၏ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အလေးပေးမှုမှာ လာအိုတွင် (၇၂ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတွင် (၇၃ ရာခိုင်နှုန်း) ထိ မြင့်မားစွာရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသော မြန်မာလူငယ်များသည် ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်အစား ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေး သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတို့အပေါ်တွင် သာအခြေခံ၍ ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။ ၄င်းတို့အတွက် ထုတ်ကုန်၏ဇစ်မြစ်၊ နည်းပညာ၊ ငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့် နိုင်ငံတကာဆုတံဆိပ်များသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ ရေပန်းစားမှု သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ယုံကြည်မှု တို့ထက်ပို၍အရေးကြီးကြောင်း Vero ၏ WAMM စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမှုထူးခြားတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြောင့် လူငယ်တွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေအပေါ် မြင်တဲ့ အမြင်ဟာ သူများတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက နားလည်ရပါမယ်။ ဒီလူငယ်တွေ ဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်၊ သူတို့တွေနဲ့ဘာကို အလေးထားပြောဆိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် နားလည်မှုက အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး” ဟု Vero ၏ Strategic Communications & Client Engagement Director ဖြစ်သူ Nicolas Trinquier က ပြောကြားခဲ့သည်။
Vero ၏ WAMM စစ်တမ်းမှ အဓိကမှတ်သားစရာနောက်တစ်ချက်မှာ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသော မြန်မာလူငယ် တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အခြားအရာများ ထက်ပို၍ အလေးထားလေ့ရှိကြသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ပို၍အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် မိသားစု သူငယ်ချင်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော အင်တာနက်ထက်ပင်ပို၍ ၄င်းတို့အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ကို တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ Facebook ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိလူငယ်(၉၉ ရာခိုင်နှုန်း) မှ ပုံနှိပ်မီဒီယာ၊ တီဗီ နှင့် ရေဒီယိုတို့ထက်ကျော်လွန်၍ အများဆုံးအသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကို စစ်တမ်းတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
အင်တာနက်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု ကျယ်ပြန့်လာမှုနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူဦးရေ ကလည်း သိသိသာသာများပြားလာပါတယ်။ Facebook ကိုသတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်တဲ့ အဓိက အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတာကတော့ အံ့သြစရာအချက်ဖြစ်မယ်မထင်ပါ။ Facebook က မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ လမ်းစတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေအတွက် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ အထူးလွှမ်းမိုးမှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်” ဟု Senior PR & Operations Manager ဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုထွေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
Vero ၏ WAMM စစ်တမ်းသည် နိုင်ငံ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအရှိဆုံးဖြစ်သော အုပ်စုဖြစ်သည့် လူငယ်များ (၎င်းတို့၏ အပြုအမှုအလေ့အကျင့်များကို များများစားစားမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် မျိုးဆက်တစ်ခု) နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံစွာသိရှိနိုင်ရန်အတွက် စုစည်းတင်ပြရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Vero ၏စစ်တမ်းမှ သိရှိရသည့်အချက်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်သူများ၏ ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကို ပိုမိုခိုင်မာလာစေပြီး ၄င်းတို့၏အမြင်ကိုလည်းပိုမို ကျယ်ပြန့်လာ စေပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ millennial လူငယ်များနှင့် ဆက်သွယ်သည့်အခါတွင်လည်း ပိုမိုထိရောက်သည့် သတင်းစကားများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံကလျှင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူတွေရဲ့အပြုအမှု၊ မျှော်မှန်းချက်တွေ ကလည်း ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ကုန်အမှတ်တံဆ်ိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကနေ ပေးလိုက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်အထိ သုံးစွဲသူတွေနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မိနေဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါက အခြားဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှုမျိုးမှာလိုပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမေးခွန်း ထုတ်ခြင်းနဲ့ သိလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်းတို့ကပဲ အစပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Vero က ဒီစစ်တမ်းကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီ လိုက်တာပဲဖြစ်ပါ တယ်” ဟု Vero မှ Digital & PR Manager ဖြစ်သူ Raphael Lachkar က ပြောကြားခဲ့သည်။
Vero ၏ WAMM survey ကို သုတေသနကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Indochina Research မှ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Vero ၏ WAMM စစ်တမ်းကို http://wamm.veropr.com တွင်ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Vero ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး The Holmes Report မှ Southeast Asia’s PR Agency of the Year အဖြစ် လေးကြိမ်တိုင်တိုင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Vero သည် ASEAN PR, social and digital marketing agency တစ်ခုဖြစ်သည်။ Vero သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် ရုံးခွဲများရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှရှိ ဦးဆောင်အေဂျင်စီကွန်ယက်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည်။ ၎င်းသည် မှီခိုမှုကင်းပြီး ဒေသခံဝန်ထမ်းမှပိုင်ဆိုင်ကာ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.veropr.com သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။